🥇 ▷ Nambarka sicir-dhimista wuxuu xaqiijinayaa qiimaha ugu wanaagsan ee taariikhiga ah ✅
Nambarka sicir-dhimista wuxuu xaqiijinayaa qiimaha ugu wanaagsan ee taariikhiga ah
Qiimaha iPad 9.7 wuu sii socdaa. Hadda waa waqti ku habboon in wax la iibsado, xitaa haddii Apple ay dhowaan soo bandhigi doonto sheeko cusub?
Cusboonaysiinta laga bilaabo 15.08.2019: Qiimo dhimis kale ayaa muddo dheer hawada ku jirtay, iPad 9.7 wuxuu degay ganacsatada ugu raqiisan markii hore qiyaastii 290 euro. Maanta, si kastaba ha noqotee, waxaan ogaanay hoos u dhac qiime, Thanks to voucher dhimis ayaa la heli karaa: on eBay waad heleysaa taas, haddii aad leedahay lambarka CIYAARAHA19 bogga jeegareynta. Markaa waa jaban tahay waxaanan haysanaa AppleTablet waligeed horay uma arag. Midabada la heli karo waa Space Grey, Dahab iyo Qalin. Qiimaha lagu bilaabayo (iyada oo aan code-dhimis lahayn) waa 279,90 Euro, qarashka dhoofinta kama quseeyo Jarmalka.
eBay tafaariiqda sbdirect24 waxay ku iibineysaa aaladdan 98.9% dib u eegisyo wanaagsan, sida ku xusan macluumaadka bogga sheyga VAT waxaa lagu muujiyay qaansheegta.
Xilliga deyrta, gu’ga 2020-kii ugu dambeeyay ee Apple Soo Bandhigidda qofkii beddelay iPad 9.7, kaasoo ka dhigaya qaabka hadda jira inuu u muuqdo mid duug ah – gaar ahaan maxaa yeelay muujinta waxyar ka weyn, wararka xanta ah waa inay run noqdaan. Qiimaha tafaariiqda ee lagu taliyay way kici karaan, si kastaba ha noqotee, iyo dalabyada wanaagsan ee sida kor lagu soo sheegay lama heli doono xitaa bilooyin kadib markay iibintu bilaabato. Loogu talagalay ipad aad u jaban, soo bandhigida eBay ee hadda jira waa ikhtiyaar aad u fiican – wixii intaas ka dambeeya, waa iPad adag oo bixiya Pencil taageero isla markaana taageeri doona iOS 13.
Maqaalka hore xagaagii 2018:
IPad 9.7: Soo iibso sidoo kale moodelka 2018er ka jaban
Guga ee 2018 ayaa Apple soo daabacay cusbooneysiin xiiso leh oo ku saabsan iPad 9.7. Kiniinku wuxuu hadda bixiyaa taageerada Apple Pencil iyo awood dheeri ah – oo ku fiican ciyaarta, sawirista, dusha sare, daawashada fiidiyaha, faallooyinka PDFs iyo in ka badan. IPad 9.7 laga bilaabo 2018 waxay keenaysaa qiime wanaagsan / saamiga waxqabadka, waan helnaa. Inbadan oo arintaas ku saabsan tijaabadayada iyo fiidiyowga kore.
Jarmalka ayaa Apple hoos u dhigay qiimaha iibinta aan sharciga xidhnayn (EIA) marka loo eego sanadkii hore qaabkan. Wixii ka dambeeyay horraantii 2017, iPad-ka 2017 sida moodha laga joojiyay ayaa aad uga raqiisan in la helo, waxaa sidoo kale jira qalab hadda jira dhowr gorgortan.
Dhanka kale had iyo jeer ma heli doontid, laakiin marwalba hada iyo ka dib Waxay bixisaa wax ka yar 310 euro, ama qiime ku dhoofinta qiyaastii 315 euro. Waqtiga xaadirka ah notebookbilliger.de wuxuu qariyaa ficiladan xitaa haddii aad leedahay Koontada Code MASTERPASS30 qiima dhimis 30 Euro ah oo lagu bixiyay MasterPass (Mastercard PayPal kale). Qiimaha iPad 2018 wuxuu ku kacayaa notebookbilliger.de, oo leh foojarka kaliya 284.90 euro, Markay tahay MasterPass si dhakhso ah waad isu diiwaangelin kartaa, foojarka ayaa shaqeynaya illaa 31 Ogosto.
Haa, waxaa jira kaniiniyo ka raqiisan – tusaale ahaan. Laakiin milkiilayaasha iPhone ayaa u mahadcelin doona macruufka, marka lagu daro, qalabka ‘hardware’ waa mid tayo sare leh oo muuqaal iyo taabasho aad u wanaagsan. Nasiib darro waxaan ku aragnay imtixaanka laakiin tayada kamaradaha dhexdhexaadka ah. Waana hubaal, barnaamijka “IP Pro” ma tartami karo. Tani waxay bixisaa xitaa qalab aad u fiican, tusaale ahaan, xitaa taabashada dhaqsaha badan marka aad isticmaaleyso qalin-jabiyaha Apple.
Halkan iPad 9.7 sawirada:
Qalinka Apple waa in si gaar ah loo iibsadaa. Waa qaali.
Moodhicilkii iPad 9.7 (2017) oo laga joojiyay qiimaha
Ka dib markii la daabacay qaabka 2018, qiimahiisu wuxuu hoos uga dhacay 300 euro. Dhanka kale, aaladaha hadda kama jiraan meelo badan, haddii kale sida iPad 9.7 cusub.
Oo maxaa ku saabsan barnaamijka ‘Pro Pro’?
Xitaa ka awood badan, qalabaysan oo wanaagsan, oo leh soo bandhig weyn, laakiin sidoo kale aad uga qaalisan waa iPad Pro. Qiimaha ayaa si rasmi ah uga bilaabmaya 729 euro oo ah nooca 10.5-inji, halka 899 euro uu yahay nooca 12.9 inji. Qiimaha dariiqa ee laga iibiyo ganacsatada sumcadda jaban. Laakiin waa inaad xaqiiqdii raacdaa iibsiga sugaya, maxaa yeelay hoos u dhac ku yimid qiimaha moodooyinka hadda jira ee ‘Pro Pro Pro’ ayaa laga yaabaa inay soo dhowaadaan, in kastoo Apple soo bandhigtay aalado cusub bisha Sebtember.
IPad 9.7 ee qiimaha hoos u dhaca: Gunaanad
Xilliga deyrta, soo bandhigida iPad 9.7 waxay u badan tahay inay u sii deganaan doonaan xitaa 300 oo Yuro – xilligan, heshiisyada noocan oo kale ahi waa ka reeban yihiin. Ma fileynayno inuu hoos u dhac xoog leh ku dhici doono qiimaha mustaqbalka. Haddii aad adeegsan karto foojarka MasterPass, xaqiiqdi khaladka ma geli doontid haddii aad ka hesho iPad 9.7 laga bilaabo 2018. Ma jiri doono cusboonaysiinta qalabka qalabkaan deyrta.